EU PRODUCT flat steel PRICE ROUNDUP FROM iMEPS - China Ningbo Ke Ming Machinery
EU PRODUCT flat steel PRICE ROUNDUP FROM MEPS
amaxabiso basis German wavuka, ngo-Agasti / Septemba, ngenxa yokuba kukho ukunqongophala okukhoyo isixa ziyafumaneka kwi kokubini kubavelisi yaseYurophu phesheya. Ngokutsho inguqulelo entsha MEPS yaseYurophu Steel Review, unikezelo kuhlala imiqathango, ngakumbi iimveliso camera, kunye namaxesha eziqalelo unikezelo waphuma waya ekupheleni konyaka nangaphaya. babelawula iziko Service sibenza ngokukhawuleza njenge inani lokuphela abasebenzisi, ebeliza kubeka ushishino ngqo kunye amatye okusila, athenga abasasazi ukuze ufikelele ngentsimbi ngokukhawuleza.
amaziko enkonzo Italian ingxelo supply yobunzima. Noko ke, imiphetho qhubeka ukuba oluphumayo. Kuba Okwangoku, agents madolw 'ukuba uhlawule ngaphezulu. Icandelo lonikezelo inomthamo kakhulu kunye nenani stockists nangoku bethengisa kakhulu ngamandla.
Kwi-UK, uninzi lixa imveliso estrip lokusila phambili, kule nyanga, njengoko abavelisi yelizwekazi yaseYurophu baphakamisa amaxabiso basis ukulinganisa esikiti omhle ngokuncipha. Ababoneleli ngoku ethetha ukwanda olongezelelweyo. Uninzi abasasazi zisebenzisa ukunyuka lokusila, ngoko elinephepha zamkelekile. Stocks ephantsi ngenxa yokuba ubonelelo apho kushota khona. Indawana ukufumaneka encinane evela abarhwebi.
abathengi Belgian lathi kuhlabana ngamaxabiso aphezulu ayibonisi nayiphi ukukhula okufanayo kwemfuneko, nangona intengiso iziko lenkonzo izizathu ezilungileyo. iincwadi Mill ime kakuhle, kuba inkoliso iimveliso strip okusila, zizele ukuya kuDisemba, okanye nangaphezulu. Quantities nambalwa kakhulu kwaye kukho ukulibaziseka kule amaxesha elikhokelayo delivery sele elide. Distributors ingxelo ukuba amaxabiso lokusila ophezulu ingenakusetyenziswa kulophulo amaxabiso zokuthengiswa kuzo zonke iimeko.
A wokunqongophala ngokufumaneka kwakhokelela ekubeni amanani isiseko ephakamileyo eSpeyin. kukho amaziko Service ochaphazelekayo ukuba abathengi uya ngokuyinxalenye kuphela ukwamkela lokusila avuke. Abanye abathengi silindele ukuba imiba unikezelo ingasonjululwa kwikota yokuqala 2017. Not ubuncinane, ngokuba ongenisa inokhuphiswano-ngexabiso ngaba umnikelo evela kwinani kwimithombo lizwe wesithathu, azichaphazeli antidumping amanyathelo.